Internet ဆိုတာ ပေါ်လာတဲ့ နောက်ပိုင်း လိုသမျှ အလကားပဲ လိုက်ရှာနေကြတာ လူတွေလည်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အလကား လူကြီးတွေကို ဖြစ်လို့။ မနေ့က တနင်္ဂနွေ တစ်နေကုန် AutoCAD Electrical 2009 လိုချင်လို့ လိုက်မွှေပါတယ်။ Rapidshare ကနေ Links တွေ ရပေမဲ့လို့ ကိုယ်ပိုင် Account မရှိလေတော့ Download ချလို့ မရဘူး ဖြစ်နေတယ်။ Rapidown ဆိုတဲ့ Software နဲ့ Try ပေမဲ့လို့ တနေသာ ကုန်အောင် ဆွဲလိုက်ရတယ်။ ပြီးလည်း ပြီးရော ဖွင့်မရဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ကနေ့ မနက် အလုပ်ထဲ ရောက်တော့မှ ရှာကြည့်တော့ ချော်တောငေါ့ပြီး သွားတွေ့တယ်။
ကဲ အလကားလူကြီးများအတွက် AutoCAD Electrical 2009 အလကား ပေးပါပြီဗျာ။
အောက်မှာ စိတ်ကြိုက် Download သာ ဆွဲကြပေတော့။
Filefactory Hostingက နည်းနည်း စောင့်ရတာက လွဲရင် Download လုပ်ရ အဆင်ပြေတယ်ဗျာ။
ဒီ Linkလေးကနေ Download လုပ်သွားတယ် ဆိုတဲ့ အမှတ်အသားလေး အနေနဲ့ Comment လး တစ်ခုစီတော့ ချန်ခဲ့ဗျာ။ အဆင်ပြေရင် ပြေတယ်။ မပြေရင် မပြေဘူးပေါ့နော။
Download DVD1 from FileFactory
Download DVD2 from FileFactory
NAING WIN THAN said...
၀င်တော. ဖတ်သွားပါတယ်၊ လောလောဆယ် အော်တိုကတ် နဲ အလုပ်လာ ရှာတာ အလုပ်မ၇သေးတော.ကိုယ်ပိုင် Computer လည်းမရှိသေးချိန်မို. AutoCAD Electrical 2009 ကို Download မလုပ်နိုင်သေးပါ၊ ဒါပေမဲ. လုပ်ဖြစ်မှာပါ။
hi bro . i sawalot of download link. so how many download link , i need to download? pls tell me , how can i download? thanks
You may need to download all of the download links from filefactory. Thanks
ဒေါင်းလုပ်သွားလုပ်တာ လုပ်လို့ မရဘူး ခင်ဗျား။ ဖိုင်ကမရှိတော့ ဘူးလို့ ပြောနေပါတယ်။
Here is my web site http://rincon-luna.no-ip.org/en/node/47754
Check out my website - www.linkiamo.com
in case you proceed this in future. Numerous other people can be benefited out of your writing.
Here is my blog post; regzooka